DEG DEG: Qaraxyo kala duwan oo ka dhacday Muqdisho & Xog aan ka helnay… – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTADEG DEG: Qaraxyo kala duwan oo ka dhacday Muqdisho & Xog aan ka helnay…
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax gaari oo ka dhacay Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir.
Qaraxan ayaa ka dhacay Xaafadda Buulo Xuubey ee degmadaasi Wadajir, waxaana la sheegay in gaargiisa loogu xiray sarkaal ka tirsan Ciidanka Nabad Sugida, inkastoo uu ka badbaaday qaraxaasi.
Ugu yaraan 2 ruux ayaa ku dhaawacmay, kuwaas oo ka agdhawaa halka uu qaraxu ka dhacay, sida ay xaqiijiyeen Ilo deegaanka ah.
Ma jiro weli wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha Laamaha Ammaanka oo ku aadan qaraxaasi
Dhinaca kale waxaa Bomb Gacmeed lagu weeraray Ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda oo ku sugnaa Degmada Yaaqshid ee Gobolka Banaadir.
Kooxo hubeysan ayaa la sheegay in weerar ay ku qaadeen fariisin Ciidamada Dowladda ay ku leeyihiin Xaafadda Towfiiq ee Degmadaasi Yaaqshid.
Lama oga illaa iyo hadda khasaaraha dhabta ah ee Ciidamada Dowladda ka soo gaaray weerarkaasi.
Illaa iyo haddana ma jirto wax war ah oo uu Maamaulka Degmada Yaaqshiid ka soo saaray weerarkaasi.
Mudooyinkii dambe ayaa waxaa Magaalada Muqdisho ka dhacayay falal liddi ku ah amaanka, mana muuqato qorshe ay wax kaga qabaneyso Dowladda Soomaaliya.
43,819 total views, 769 views today
43,819 total views, 769 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
43,891 total views, 769 views today
43,891 total views, 769 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
43,905 total views, 769 views today
43,905 total views, 769 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
43,927 total views, 769 views today
43,927 total views, 769 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
43,962 total views, 771 views today
43,962 total views, 771 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]